Arcade lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
aterineto Arcade lalao tsy novesaran'ny olana amin'ny pitsiny ny gameplay sy be pitsiny tetika. Misy afaka ny hilalao, manao jumps, mihetsika eo amin'ny sehatra, ka mahatonga sasany concomitant andraikitra: mba hitifitra, hanangona, ady. Ataovy lisitra ny endri-tsoratra ihany koa ny tsy mila, satria mety ho fantatra akory va ny endri-tsoratra sy ny vaovao. Misy tantara amin'ny hatsikana, singa ny ady, ny endrika, ny fangatahana lojika, hafainganam-pandeha sy ny marina. Ho an'ny tanora no ho miakatra Gamers manana ny foto-kevitra amin'ny asa. Sary azo indrindra mamely raha toa kilalao ho an'ny zazakely sy ny mampitony loko, miaraka amin'ny fanindriana ny fanatrarana ny tanjona.
Asera any anaty ala
Mpamono olona mpamono olona
Trano volamena kamiao
Lalao Arcade tamin'ny Category:
Farany Arcade lalao
Lalao Online Rehetra Arcade lalao an-tserasera
Mampientanentana Arcade Games
-tserasera Arcade lalao no tena fahita, ary afaka miresaka momba azy ireo hiaina mandrakizay isika. Ny dingana tsotra foana ary na dia somary notsorina rehefa mikisaka amin'ny habakabaka toetra sy manao asa sasany. Ho amin'ity faritra ity dia ny lalao noforonina ny ankamaroany noho ny vending milina sy ny lalao Nampahery, fa efa ela izy ireo nifindra tamin'ny solosaina Monitors, araka izay mora hita amin'ny alalan'ny fanokafana ny sokajy. Toy ny anarana hafa ao amin'ny gazety, milaza momba ny lalao video, ianao dia afaka mahita ny famaritana ny – platformers. To arcades lalao nidobodoboka be ny sasany lohahevitra, mpitifitra sy miady lalao, fa simulators anjara dia tsy hahita eto. Ho ohatra, hahatsiaro indray ireo hazakazaka voalohany, izay nandeha ho maimaim-poana ho an'ny Windows fampiharana. Tsy tena maro loko sary sy ny fahasoavana, ary ny fihetsika dia mikendry ny andalan-teny ao amin'ny lalana.
Arcade lalao maimaim-poana toy izany koa any amin'izao fotoana izao, fa ny maro isan-karazany sy ny mpilalao lehibe kokoa dia mety hifidy fiara hafa, ankoatra ny fiara sy ny fiara hafa. Ny mahazatra fototra Arcade olona manao hetsika ny notakin'ny fotoana, manangona zavatra, mahazo tombontsoa sy hevitra, mandresy sakana sy hanao asa hafa. Raha Arcade io lalao maimaim-poana ady (ady), ny endri-tsoratra ho andiam-fitokonana, Niantoraka, ny fanafihana mikendry ny fahavalo. Rehefa miasa, ny mpilalao mametraka ny vato, jumps, ganagana, ary ny tanjony – manao fanafihana fiantraikany lehibe kokoa, fa tsy ny fahavalo. Ny lalao sady tokana dia ahitana ady rehefa ny toetra amam-panahy faharoa fehezin'ny ordinatera, ary fery vao. Amin'ity tranga ity, ny dingana faharoa dia afaka mampifandray ny mpilalao sy handray ny andraikitry ny miaramila faharoa. Concept « platformer » avy amin'ny Nampahery (Nampahery) noho ny lalana ny endri-tsoratra mifindra amin'ny dingana, tapa-kazo, biriky, izany hoe sehatra izay mihantona eny amin'ny habakabaka, na dia nidina ny fiara ambonin'ny – sampan-kazo, rahona, rindrina sy ny sisa. Nandritra ny andalan-teny tsy maintsy manangona zavatra izay manome hery na mampihatra ny hampitombo ny heriny, manao invulnerable na tsy hita maso eo anoloan'ny fahavalony, hanampy hamaky ny sakana, hampitombo ny hafainganam-pandeha. Ohatra manaitra ny lalao maromaro momba ny Super Mario na Sonic sokina.
mampiavaka ity karazana
Lalao aterineto Arcade afaka hampitombo ny tetika ao amin'ny virtoaly tsipika, izay mitovy ihany koa ny slot milina, rehefa eo anoloan'ny iray fototra ny Pop sy nitsambikina zavatra izay tokony ho voa. Tsarovy ny ranomasina ady, izay nitsangana teo amin'ny teatra rehetra, ary na dia amin'izao andro izao dia afaka mahita ny analogue tranainy ity kilalao eo amin'ny toerana rehefa mijery ny nahita lehilahy iray voatifitra sambo eo amin'ny faravodilanitra. Dia araka izany fomba mandroso sy maoderina Arcade lalao, izay tsy maintsy hitifitra amin'ny tanjona ary miaraka amin'izay koa, dia tsy voatery ho eo no ho eo. Na inona na inona mety hitranga sy rehefa nitondra fiara handeha, ohatra, rehefa misy Cowboy mitaingina ny soavaly sy mitifitra amin'ny zavatra izay mihetsika, koa. Natao androany kofehy mamela ny fialam-boly isan-karazany sy ny Manitrika ho any foto-kevitra. Ao amin'ny Arcade:
dia misy ady manohitra ny zombies,
ny polisy haza mpanao heloka bevava ao amin'ny fiara, ary niara-mitarika gunfight,
sariitatra litera manangona tombontsoa sy mandeha any amin'ny tanjona,
Ny andalan-teny mampihetsi-po ny labyrinths na miendrika biriky hafa mba hanokatra ny andalan-teny,
Izany rehetra izany ihany koa ny lalao ny foto-kevitra. Indraindray amin'ny lalao iray miara faritra maro, ary avy eo dia Gamers amin'ny filan'ny nofo manokana fianarana tolo-kevitra toy izany, niverina ho azy tsindraindray. Tsy misy antitra dia tsy ho faty mandrakizay. Dia ilaina ny manome azy alokaloka vaovao, manome manova sy milalao chords vaovao hanakoako.